Agaasimaha Wasaarada Shaqo Gelinta Oo Furay Kulan Ku Saabsan Xeerka Xuquuqda Caruurta | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Agaasimaha Wasaarada Shaqo Gelinta Oo Furay Kulan Ku Saabsan Xeerka Xuquuqda Caruurta
Hargaysa (SDWO): Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshadda Somaliland ayaa maanta magaaladda Hargaysa ka furay kulan ku saabsan xeerka ilaalinta xaquuqda caruurta yar yar.
Maxamed Ilkacase, oo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Xeerkani waa xeerkii xaquuqda caruurta, muddo badan na ay soo socotay hawshiisu in aynu ka shaqayno.
Kadib na wasiirrada ay wasaaradahoodda khusayso ay isaga yimaadeen, iyadoo la isla qaatay in dadka farsamoyaqaanadda ah ee wasaaradaha ay khusayo in ay si qoto dheer u akhriyaan xeerkaasi.
Taasoo macnaheedu tahay in aynu qodob-qodob u dul-istaagno, oo wixii talladiina ah, wixii tusaalihii na ah, ka hor inta aanu marin hay’adaha sharciga, ta aynu maanta isiugu nimid waa taas”.
Waxyaabahaas oo dhan ee duruuf ah ayay tahay xeerarkii xakamayn lahaa, ee islaamka iyo dhaqankeena iyo shuruucdeena waafaqsanaa, in ay salka u dhigno.
Tusaale ahaan waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid ah oo qabadaha jira ka mid, ilmaha caruurta ah ee suuqa ku dayacan ee waalidkiisu na miyiga joogaan, maxay diinta islaamku ka qabtaa? Ama maxaa xeerkeenu ka qabaa” ayuu yidhi agaasime Ilkacase.
Filsan Xuseen Khaliif, oo ka hadlaysay kulanka iyo waxa uu daaran yahay waxay tidhi “Kulankeenani wuxuu daaran yahay ama uu daba socdaa, kulan hore aanu u qabanay, oo ay ka qayb galeen wasiirro. Si la iskula eego xeerka caruurta.
Waxaanan ka codsanay wasiirrada in ay noo masuuliyiinta waaxyaha farsamadda ee shaqadda gacanta ku haya, si ay u akhriyaan oo xeerkan loo dul istaago oo qodob-qodob loogu eego.
Waxaanay uga mahad celiyeen wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda wakhtiga badan iyo dedaalka ay gelisay sidii loo heli lahaa xeer ilaalinaya xaquuqda ay leeyihiin caruurta yar yar oo ah mustaqbalkii ummada.